Fitaovana famokarana labiera, trano famokarana labiera, fermenter, tanky brite - NingBo COFF Machines Co., ltd
NingBo COFF Machines Co., Ltd dia mpamorona matihanina ambony sy mpanamboatra labiera vita amin'ny labiera feno kalitao avo lenta any Shina miaraka amina serivisy tena tsara.
Mifantoka amin'ny famokarana fitaovana famokarana labiera avo lenta izahay. Manana fotodrafitrasa tena tsara izahay amin'ny famokarana sambo vy tsy misy fangarony eran-tany ho an'ny labiera, divay, ronono, alikaola, simika tsara, fanafody, sns.
Tsy vitan'ny mpanamboatra fitaovana labiera asa tanana fotsiny isika fa mahafantatra bebe kokoa momba ny kolontsain'ny labiera asa-tanana sy ny asa-tanana tsy manam-paharoa. Mifantoka hatrany amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ho an'ny mpanjifa izahay ary mikendry ny hanasongadinana ny fomba kanto amin'ny antsipirian'ny vokatra rehetra mba hanomezana vokatra avo lenta sy serivisy be dia be.
Ny fitaovan'ny microbrewery sy ny serivisy dia nahazo laza malaza tany Etazonia, Kanada, UK, New Zealand, Australia, Japan, Russia, ary ireo firenena sy faritra Eurasia hafa. 80% ny mpanjifanay dia avy amin'ny tolo-kevitry ny mpiara-miasa aminay. Mihoatra ny 90% ny mpanjifa manangana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra miaraka aminay. Tongasoa eto hitsidika sy hiara-hiasa amin'ny COFF!
mianatra bebe kokoa momba ny orinasa
Ny faritra indostrialy misy antsika dia mirefy 220 metatra toradroa. Manana iray amin'ireo atrikasa matihanina lehibe indrindra ao amin'ny indostrian'ny fitaovana fanaovana labiera any Sina izahay. Adiny iray sy efapolo minitra vao mitondra fiara avy any amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Shanghai Pudong na efapolo minitra vao mitondra fiara avy any amin'ny seranam-piaramanidina Ningbo.
Nanangana ekipa injeniera sy mpamolavola 10 izahay, indrindra ireto injeniera dimy ambony ireto izay manana traikefa mihoatra ny 15 taona manampy ny indostrian'ny asa tanana hivoatra sy hanavao ny ho avy.
Nahazo ny mari-pankasitrahana ASME ny mpiasanay.
Nahazo ny mari-pahaizana ASME, AS1210 ny vokatray.
vola isan-taona tapitrisa Yuan）
Raha ampitahaina amin'ny fanafanana etona nentim-paharazana, ny rafitra fanamafisam-peo momba ny menaka hafanana avy any Coff dia manome fahafaham-po bebe kokoa amin'ny fampihenana ny fanjifana angovo
mandritra ny fanatrarana fahombiazana miasa mitovy na tsara kokoa.
100% vita amin'ny vy tsy voamarina. Ireo mpanara-maso inprocess dia manome ny fahaizan'ny FAT miasa tanteraka ary farafaharatsiny farafahakeliny fanandramana in-2 alohan'ny fanaterana.
Ny takelaka sakaizan'ny mpampiasa dia mora takarina ary mamela ny fanaraha-maso tsotra sy ny fibaikoana ny fizotran'ny labiera. Mety hitranga amin'ny fanatanterahana ny fomba dingana maro, fampisehoana ny soatoavina tena izy ary napetraka.
Ny endriny rehetra dia misy rafitra fanamafisana sy fanamafisam-peo mifangaro, mipetaka sy tariby miaraka amina rafitra paompy mitambatra.
Aza ferana amin'ny alàlan'ny fitaovana ratsy ny zava-pisotro misy anao, entinay miaina amin'ny labiera avo lenta sy mahomby ary mahomby ny labiera ataonay.
Manafosafo ny antsipiriany izahay mba hahazoana antoka fa manana vokatra avo lenta sy serivisy matihanina ianao.
Rafitra fanamainana solika hafanana
Vita tanteraka ny baikon'ny mpanjifan'i Nagano Japan momba ny rafitra fanamainana menaka 200L.
10BBL 20BBL 40BBL fiara mifono vy sy labiera brite dia halefa any Denver, Etazonia tsy ho ela.
Ny Brewhouse Systems fanafanana menaka 200L dia halefa any Nagano Japana
Izahay dia mpamorona matihanina malaza ary mpanamboatra fitaovana fanaovana labiera manao asa-tanana avo lenta
Ny baikon'ny mpanjifa Nagano Japan...
200L menaka fanafanana Brewhouse S...
COPYRIGHT © 2022 NingBo COFF Machinery Co., ltd. ZO REHETRA VOATOKANA